Nolazainy araka izany fa efa tapitra amin’io taona ho avy io ny fem-potoana hitondran’ny holafitry ny mpanao gazety. Hisy araka izany ny fifidianana filoha an’io holafitra io amin’ny taona ho avy, koa amin’izany no hanaovana mialoha io karatra maha matihanina io.
Anisan’ny noresahina tao ihany koa ny filazana vaovao tsy marina, ary nisy araka izany ny fanakianana ireo gazety maromaro izay nomeny fampianarana manokana mihitsy amin'ny asa fanaovan-gazety.
Nasiany teny ihany koa ny fanasaziana ireo mpanao facebook manaparitaka vaovao tsy marina sy manaratsy ireo mpitondra. Izay faly hoy hatrany izy dia faly, izay tsy faly dia ny asany no ataony, hoy i minisitra Harry Laurent RAHAJASON, fantatratra amin'ny hoe Rolly Mercia, namarana ny resany.
Alohan'ny hampianatra olona izy dia tsara esoriny ireny romborombona mavomavo ranombolamena amin'ny sainam-pirenena ireny, fa tsy misy an'ireny ny Sainam-pirenena Malagasy, tsetsatsetra tsy aritra.
mardi, 12 décembre 2017 20:25
dimanche, 10 décembre 2017 20:03
dimanche, 10 décembre 2017 17:16
samedi, 09 décembre 2017 19:12
samedi, 09 décembre 2017 07:55
samedi, 09 décembre 2017 05:30
samedi, 09 décembre 2017 03:57
vendredi, 08 décembre 2017 17:42
vendredi, 08 décembre 2017 06:54
jeudi, 07 décembre 2017 04:24